Ogaden News Agency (ONA) – Waari Mayside War Makaa Hadhay ! – Noora Afgaab
Waari Mayside War Makaa Hadhay ! – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ November 24, 2015
Waxaa Dalka Masar ku geeriyooday Allaha u Naxariistee safiirkii Somaliya mudada dheer u fadhiyay halkaa mudane Cabdulaahi Xassan Maxamud. Waa waajib diini ah qofka muslimka ee geeriyooda in aan Ilaahay uga barino dambi dhaaf. Xumaan iyo wanaag midkoo lahaa iyo taariikhdiisa oo qoran Ilaahay ayuu qof waliba la hortagayaa.
Waxaa aad looga hadal hayaa magaalada Jigjiga taariikh nololeedkii Safiirka ood moodo in laga boodayo intuu ahaa Gudoomiyahii Jabahadii WSLF ee in ka badan 90% dalka ka xoreysay gumaysiga 1977-kii.
Qofkastoo nool wuu dhiman, waxaase dunida ku hadha oon duugoobin taariikhda qofka halyayga ah ee umadiisa iyo diintiisa u halgama. Waxaan aad ula yaabay sida raqiiska ah ee umadda Somaliyeed, kuwa gumaysiga kujira iyo kuwa in la gumaysto doonaya hadda ay uga tirtirayaan una aasaan wax kastoo muujinaya inay jirtay ama jirto taariikh gumaysi iyo halgan oo ka dhexeeya Itoobiya iyo umadda Somaliyeed. Waxaan fiir-fiiriyay siday saxaafadda Somalida wax uga qoreen taariikh nololeedkii AUN safiir Cabdulaahi Xassan. Waxaan ka waayay meel lagu qoray inuu ahaa gudoomiyihii jabhaddii WSLF ee hogaaminaysay dagaalkii gobanimadoonka 1975-1977. Waxaan akhriyay warmurtiyeedka ay Wasaaradda Arimaha Dibadda kasoo saartay tacsida Safiirka, halkaasoo ay ku sheegeen taariikh nololeedkii safiir Cabdulaahi Xassan. Waxay u qoreen markay damceen inay ka hadlaan taariikhda uu ku lahaa WSLF sidan : Sanadkii 1981kii waxaa loo magacaabay la-taliyaha Maaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya ee arimaha jabhadaha.
Waa arin aad loola yaabo oo muujinaysa heerka is-dullaynta ah ee Somali ay mareyso in Wasaaradii Arimaha Dibadda ay ka cabsto inay taariikhdii Safiirka iyo dalka siday u ahayd u qorto. Waxaan baadhay wargaysyadii caalamka ee 1977kii laga qorayay dagaalkii Ogadenya iyo waxay ka qoreen safiirka. Waxay markii ugu horeysayba ishaydu qabatay wargays aan kasoo sawiray intan;
Waxaa iyada hubaal ah haduu Safiir Cabdulaahi Xassan AUN ku adkaysan lahaa mabda’iisaa inuu maanta guul joogi lahaa, war fiicanna ka hadhi lahaa, waxaase dhab ah inuu AUN Safiirka qudhiisu aad ugu dadaalay inuu aaso taariikhdiisii gobanimadoon, hab aad moodo inuu ka qoomamoonayay, isagoon sooba qaadin marar badan oo wareysiyo lala yeeshay. Waana meesha ay Somalida kusii qulqulayaan, inay aasaan midkii taariikh ku lahaa halgankii gumaysiga Itobiya lagula jiray .. inta halganka socda wada ama jecel mooyaane.
Ilaahay ha’inugu sugo xaqqa.